Feminism – Ahmed Y. Hassan
Sida aan u fahmay “Feminism”:
Sida Nabigeenu SCW sheegay, marka Ibliis (Shaydaan) warbixinaha ka dhagaysanayo ciidamadiisa jinka iyo bani’aadamkaba leh, ayaa shaydaan kastaa soo bandhigaa wixii u qabsoomay maalintaa. Shayaadiintu waxa ay sheegaan in ay ka shaqeeyeen sidii ay dadka muslimka ah karkaarka u waydaariyeen. Qaar baa sheega inuu qof muslim ah ku kallifay inuu khamri cabo, ama wax xado, ama qof dilo ama,,,ama. Intaas oo dhan marka uu maqlo wuxuu ugu jawaabaa waxba maydaan soo qaban. Marka dambe ayaa waxa imaadda mid leh anigu nin iyo ooridii ayaan soo kala furay. Markaas buu Ibliis shaydaankaas soo dhaweeyaa oo casuumaa, darajadiisana kor u qaadaa.
Hadda fahanoo in dil la geysto ama dambi kale la sameeyo Alle ayaa diiday waana xaaraan, laakiin in laba qof oo isqabay isfuraan xaaraan maaha. Hadaba haddaanay xaaraan ahayn muxuu Ibliis ugu farxayaa ayaa iswaydiintu tahay? Waxa ay jawaabtu tahay, unugga ugu yar ee bulshadu waa qoys, hadii qoys la kala kaxeeyo, waxa burburaya unugga ugu yar ee bulshada, waxaana ku xiga in bulshada dhammaanteed ay burburto isla markaana waxa fududaanaysa in qof walba cidlo shaydaan ka helo, waayo guurku waa balaayo xijaab.
Waxa taas ka marag kacaya in dagaalada dunida ka socdaa ay dhammaantood ku biyo shubanayaan in la burburiyo qoyska umadda muslimka ah.
Tusaale, Nick Rockefeller, oo ah mid ka mid ah reeraha ugu hantida badan dunida, waa sida ay sheegtaane, asal ahaanna ka soo jeeda Yuhuudda shayaadiinta caabudda, isla markaana dabada ka riixda mad-habka Sahyuuniyadda (Zionism) ayaa isagoo u waramaya nin la odhan jiray Aaron Russo, wuxuu u sheegay in Rockefeller Foundation uu u taageeray Dhaqdhaqaaqyadii Xorriyad-doonka ee Dumarka Maraykan, wuxuuse u raaciyey in sababta uu Rockefeller Foundation u taageerayay dhaqdhaqaaqyadaas ay ahaayeen laba sababood:
1. Ka hor dhaqdhaqaaqyadaa Xornimo-doonka ee Dumarka Maraykan, badh ka mid ah dadka Maraykan cashuur kamaamaan qaadi jirin. Wuxuu u jeedaa dumarka Maraykan ma aysan shaqayn jirin, markaa cashuur noogama soo xaroon jirin.
2. Dumarku marka ay shaqo-galaan, caruurtooda waxa iskuulada la geyn doonaa iyagoo yaryar, ka dibna waxaanu bari doonaa sida loo fikiro, ka dibna ilmaha yari waxa uu qoys ka dhigan doonaa macalimiinta iskuulka iyo dawladda, waxaanu waalidkii u arki doonaa wax aan jirin oo uu wax ka barto, tanna waxa ay horseedi doontaa burburka qoyska.
Bal aan idinla wadaago hadalo ay yidhaahdeen dumarka hor booda Feminism-ka dunidu.
“Waxaan rajaynaynaa in sanadka 2000 aanu caruurtayada ku korin doono iyagoo aaminsan awoodda Bani’aadminimo, isla markaana diiddan awoodda Alle” Gloria Steinem, Leader of American Feminist Movement.
“Inkastoo uu guurku yahay addoonsiga dumarka, waxa iska cad in ujeedada dhaqdhaqaaqyada dumarku uu awoodda saarayo in la weeraro qoyska, xoriyadda dumarkuna ma hirgeli doonto hadii aan la burburin guurka” Sheila Cronin, A Radical Feminist Leader.
“In la dabargooyo guurku waa ujeeddooyinka biyo kama dhibcaanka ah ee dhaqdhaqaaqa Xoriyadda Dumarka, sidaa darteed, waxa muhiim noo ah in aan dumarka ku dhiiri-gelinno in ay isaga tagaan/haajiraan raggooda, isla markaana waa in taariikhda dib loo qoraa oo dumarku ku noqdaan Faalisooyinkii iyo Sixiroolayaashii ay ahaan jireen” Baaqa Caalmiga ah ee Feminism-ka kaas oo la oo saaray sanadkii 1971.
Markaad intaas oo dhan isu-geyso waxaa kuu soo baxaya in dalkeena caruurtoodii iyagoo aad u yaryar ay dugsiyo ku jiraan, isla-markaana manhajka ay bartaan aanu ahayn mid si sax ah loo sameeyey, macalimiinta u dhigtaana ay yihiin dad aynaan isku dhaqan iyo diin midna ahayn. Waxana intaa dheer, in manjahka caruurteena la baraa lagu sameeyey wax ka yar 2-3 bilood, halkaana aad ka garan karto cidda la doonayo in la soo saaro.
Markaad aragto qof dumar ah oo muslimad ah oo meelaha ka sheeganaysa ama ku qoranaysa inay tahay Feminist waa laba mid uun, in aanay fahminba waxa Feminism yahay ama in ay u shaqayso qolooyinkaa.
Waxa muhiim ah in caruurta iskuulada lagu qoro marka ay gaadhaan 6-7 sanno, inta ka horeysana diinta aad loo baro. Marka iskuulada la qorana aan waxbarasho lagu wareerine loo ogolaado in ilmuhu fikiro, ciyaaro isla markaana cabbiro sida uu dunida u arko, markaas ayaa waalidkuna jihayn karaa ilmihiisa.
Posted on February 5, 2020 Author Ahmed Y. Hassan
Next Next post: World with out Islam?